Wasiirka Dib u dejinta oo ka waramay waxyaabihii u qabsoomay 2011-ka | Somaliland.Org
December 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Wasiirka wasaaradda Dib u Dejinta ee Somaliland Mudane Cabdirisaaq Cali Cismaan ayaa waxuu maanta ka Xog warramay waxqabadkii wasaaradda u hirgalay Sanadka 2011 ee Gabo gabada ah iyo Qorshaha ku tallo gal ee Sannadka cusub ee fooda inagu soo haya.
Wasiirku waxa uu sheegay inuu Mas’uuliyada wasaaradan hayay Mudo Todoba Bilood ah isagoo xusay inay xilli saacadeed cayiman u sameeyeen barnaamijyadii dhinaca beeraha ee ay hirgelinaysay hay’adda WFP, isla markaana wasaarad ahaan ay dabagal sameeyeen.
Mudane Cabdirisaaq Cali Cismaan waxa uu sheegay in Wasaaradda dib u dejintu ay door balaadhan ka qaadato mashaariicda Ceelasha Biyaha ee gobolada bariga, halka sidoo kalena dadka reer guuraaga ah ee abaaraha ka barakacay ee dib loo deegaamaynayo ay wasaaraddu ka leedahay Siyaasad Cad oo mashaariiceed,isagoo intaas ku daray dadkaas lagu xooleeyay Sadex kun iyo Todoba Boqol Neef oo Lo” & adhi isugu jira.
Wasiirka Dib u dejinta ee JSL waxa uu ka war bixiyey dib u dhis & qalabayn lagu sameeyey wasaaradda gaar ahaan xarunteeda Caasimada Hargaysa iyo weliba dayactir lagu sameeyay gaadiidka Wasaaradu ku hawl gasho.
Warbixin sanadeedka wasiirka waxa lagu xusay in dawladdu qorshe cad ka yeelanayso arrimaha barakacayaasha isla markaana aanay hadda ka dib dhacaynin in cid waliba meel bac ku xidhato amase ay sheegtaan barakacayaal.
Gebagebadii warbixinta wasiirka Dib u dejinta JSL Mudane Cabdirisaaq Cali Cismaan waxa uu sheegay in qorshayaasha sanadka Cusub ay ku jirto in kormeero badan lagu soo maro gobolada & degmooyinka waddanka, si loo ogaado mashaariicda ay wasaaradani ka hirgelin doonto.
Previous Post“Shirkadii diida isku xidhka isgaadhsiinta liisanka uma cusboonaysiinayno”Next PostWalxo qarxa oo lagu qabtay Hargeysa Iyo ciidanka qaranka oo ka hadlay	Blog